Alexa.com si Site Overview: New Akụkụ Nye Marketers Better Snapshot nke ọchụchọ na Ọdịnaya Ohere, n'ihi na Free | Martech Zone
Maka ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ iru ndị na-ege ntị ọhụụ na ntanetị, nghọta banyere mmemme iwulite ndị asọmpi, ike na adịghị ike, yana ohere iji ruo ma jide ndị na-ege ha ntị nwere ike rụọ ọrụ dị ike na ịme ọganiihu. Agbanyeghị, nghọta asọmpi dị otú ahụ dịkarịsịrị na ụlọ ọrụ nwere nnukwu akụ na ndị otu nyocha ha.
Alexa Site Isi
The Alexa.com Site Isi ọrụ - nke na-eje ozi ihe karịrị nde ndị ọrụ atọ pụrụ iche kwa ọnwa - na-enye data dị oke mkpa metụtara weebụsaịtị, ndị na-ege ntị, na oghere na ohere okwu. Ọ na-enyekwa otu data ahụ na saịtị ọ bụla na-asọmpi. Kama ịbaju ọtụtụ ndị na - ere ahịa na ọtụtụ data edozighi ahazi, akọwaghị, ma chọọ nyocha sara mbara tupu enwee nghọta ọ bụla, ọrụ nyocha nke saịtị na - eme nyocha dị mkpa na akpaghị aka. Ndị na-ere ahịa nwere ike itinye weebụsaịtị, yana nchịkọta saịtị ga-eweghachi ndepụta omenala nke isiokwu isiokwu maka saịtị ahụ, yana ndepụta nke weebụsaịtị kachasị asọmpi maka ndị na-ege ntị na saịtị ahụ, usoro ntanetị nke saịtị ahụ ma e jiri ya tụnyere nkezi nke saịtị asọmpi kachasị elu. , na ihe omuma ndi ozo.
Site n'inyere ndị na-ere ahịa aka ịmata ohere ebe ndị asọmpi na-agbazi uru ndị bara uru iji ruo ndị na-ege ntị na akara nke aka ha erubeghị, Nchịkọta N'uba na-eme ka ọ dị mfe maka ndị na-ere ahịa iji mee ihe data kwadoro.
“N’afọ ole na ole gara aga, anyị mere nnukwu ihe iji nyere ndị na-ere ahịa dijitalụ aka ịmetụta ezigbo mmetụta na nzukọ ha site na mgbakwunye nke ikike ọgụgụ isi SEO, SEM na ike nyocha ọdịnaya. Ọrụ ọhụụ nke saịtị ọhụrụ bụzi ebe etiti maka ndị na-ere ahịa na-enweghị ego iji jikwaa iju mmiri data, mana ha chọrọ nghọta ziri ezi ma dị irè ha nwere ike ime ngwa ngwa. Site na ịdebe ebe ndị asọmpi na-achọta ọganiihu, ndị ahịa nwere ike ịchọpụta asọmpi nke aka ha. ”
Andrew Ramm, Onye isi oche nke Alexa.com
Alexa Site Isi Atụmatụ
Wepụtara na June 27th, Ebumnuche ọhụụ banyere saịtị ọhụụ iji nye ndị na-ere ahịa nghọta ha dị njikere itinye n'ọrụ, gafee mpaghara gụnyere isiokwu ahaziri iche, nyocha asọmpi, nghọta ndị na-ege ntị, yana ọnụọgụ ọnụọgụ weebụ:
Isiokwu ohere - Nlekọta saịtị na-akwado ndụmọdụ saịtị na-enye ndụmọdụ gafee ọtụtụ ngalaba iji kwadebe ndị ahịa na ụlọ ọrụ na usoro atụmatụ ọdịnaya dị ngwa.
Isiokwu gaps: Na-ekpebi isiokwu ndị na-enye ugbu a okporo ụzọ maka ndị asọmpi, nke saịtị ahịa ahụ ka na-ejighị.
Mfe iji ogo ọkwa: Na-eleba anya na isiokwu ndị na-ewu ewu nke saịtị ahịa kwesịrị inwe ike ịsọ mpi iji nwee ihe ịga nke ọma.
Isiokwu ahịa: Na-atụ aro mkpụrụokwu nke ndị na-ege ntị na saịtị na-eche na ha nwere ike ịzụta.
Ohere njikarịcha: Na-achọpụta mkpụrụokwu na-ewu ewu nke na-ebufe okporo ụzọ ugbu a na saịtị ndị na-ere ahịa, mana enwere ike ịme ka ịchọọ karịa.
Nyocha asọmpi - Na-enye akara ngosi iji tụnyere saịtị ndị na-ere ahịa n'akụkụ n'akụkụ na ndị asọmpi.
Okporo ụzọ isi: Na-atụle pasent nke okporo ụzọ ọchụchọ okporo ụzọ na saịtị nke marketer na saịtị ndị na-asọmpi.
Ntuziaka saịtị (backlinks): Na-atụle ọnụ ọgụgụ nke saịtị ntinye aka na-ebugharị okporo ụzọ na saịtị nke marketer na saịtị ndị na-asọmpi.
Isi okwu: Na-egosiputa okwu ọchụchọ kacha elu nke na-ebugharị okporo ụzọ na saịtị nke ndị na-ere ahịa, yana ndị na-anya ụgbọ ala na saịtị ndị asọmpi.
Ntị ndị na-ege ntị - Na-atụ aro ohere pụrụ iche iji ruo ndị ahịa nwere ike ịdabere na omume nyocha saịtị.
Ndị na-ege ntị nwere mmasị: Na-egosiputa edemede otu ndị na-ege ntị na saịtị na-atọ ụtọ, yana saịtị ndị ọzọ na-eme ihe ndị ahụ na-amasị ndị na-ege ntị.
Ndị na-ege ntị kpuchiri: Na-achọpụta saịtị na-asọmpi maka nlebara anya nke ndị na-ege ntị.
Ọnụ ọgụgụ okporo ụzọ - Ndị na-ere ahịa nwere ike nyochaa ewu ewu saịtị, njikọ aka, na uto ikike site na iji akụkọ a nke usoro ntanetị saịtị na ọnụ ọgụgụ okporo ụzọ.
Alexa ogo: Gosiputa saiti intaneti zuru uwa dum na ntinye aka.
Gburugburu ala: Na-egosiputa na atụmatụ percentages nke saịtị ọbịa site na mba.
Usoro saịtị: Na-egosiputa njikọ aka nke saịtị, isi mmalite nke okporo ụzọ, mmụba saịtị na ngụkọta usoro backlink niile.
Uru maka Ahịa na Agency Marketers
Ndị na-ere ahịa na ụlọ ọrụ ga-enwetakwa ike nyocha saịtị nke saịtị bara uru n'inyere ha aka ịmata ohere dijitalụ maka ndị ahịa (ijide njide nke ọma). Lọ ọrụ na ndị na - ahụ maka ndụmọdụ nwekwara ike ịkwado akụrụngwa gbasara nchịkọta saịtị, dịka ngwa ọrụ dị mfe iji rụọ ọrụ, iji zube ndị na - achọ ị nweta ahịa maka mmelite akọwapụtara maka ojiji ha.
“Ndị mmadụ na-enwe mmetụta uche mgbe ha hụrụ na ndị na-asọ mpi na-eti ha ihe. Nke a bụ ụzọ kachasị ọsọ iji hụ ihe na-arụ ọrụ maka ha ọ bụghị maka gị. Ọbụna n'anya m, ahutala m omume 3-4 m nwere ike ịme iji nweta nsonaazụ kacha mma.
Andy Crestodina, ngalaba-nchoputa na Chief Marketing Officer nke Mgbasa Ozi
Site n'inye ọhụụ na omimi miri emi n'ime ihe omume na ihe ịga nke ọma nke ndị asọmpi nwere, na ịnye nghọta dị ọcha achọrọ iji chụsoo ohere n'ụzọ dị irè, Alexa.com's Site Overview kwesịrị ime ka ndị na-ere ahịa nwee ike ịme mkpebi ndị ọzọ ziri ezi ma chọpụta otu ihe ịga nke ọma maka ndị mmeri ahụ.
Gbalịa Alexa's Site Review
Tags: Alexa nyochaa saịtịozu ahia Keywordsmfe-na-ọkwa Keywordsngwaọrụ n'efuisiokwu ohereorbit mgbasa ozi